Bhasikoro kana Dhudhudhu Njodzi | Mutemo Makambani Dubai
Gore rega rega, vanhu vazhinji vanobaiwa mutsaona dzemumugwagwa nekuda kwekusaita zvakanaka uye kutyaira uchimhanya. Mhosva dzetsaona dzemabhasiketi uye mudhudhudhu muDubai dzakawedzera makore apfuura, zvichikuvadza vanhu vasingaverengeki uye kunyange kuuraya vashoma.
kubatanidzwa pabhasikoro kana tsaona yemudhudhudhu
tsvaga mubairo kubva kune wakakukanganisa
Kana iwe wakamboita bhasikoro kana tsaona yemotokari mutsaona yakakonzerwa nekuda kwekushaikwa kwako, une kodzero yekutsvaga mubairo kubva kune uyo wakanganisa. Nzira yakanakisa yekuita izvozvo ndeye kuhaya gweta renjodzi yemabhasikoro kana Gweta renjodzi muDubai.
Zvinowanzokonzeresa kweBhasiketi kana Dhudhudhu Tsaona
MuDubai, zvinowanzoitika zvikonzero zvebhasiketi kana tsaona dzemudhudhudhu zvinogona kukonzerwa nekuda kwezvakawanda zvinhu. Mamwe acho anosanganisira:
Kufona kana kutumira mameseji uchityaira
Kwete kutevedza mitemo yemigwagwa
Zvisiri pamutemo tambo inoshanduka
Vatyairi vasina ruzivo
Kusaita hanya paunenge uchityaira
Chii Chaunofanira Kuita Mushure Mekukanganiswa kana tsaona?
Zvaunoita mushure mekupinda mubhasikoro kana mutsaona yemudhudhudhu zvinogona kukanganisa kuchengetedzeka kwako, kuvaka nzira yekutsvaga muripo unobudirira, nekudzivirira mumwe wacho kubva pakuipomera. Zvishoma zvinhu zvakakosha zvekuita mushure mekurasika tsaona zvakanyorwa pazasi:
Enda kunzvimbo yakachengeteka kuti udzivise dzimwe tsaona uye terera kukuvara kwako kana kwakanyanya. Tsvaga kurapwa kana zvichidikanwa.
Bata mapurisa pamwe nevamwe vane masimba.
Unganidzai zvapupu-uye ufakazi nekutora mafoto. Usatize kubva pane saiti.
Zivisa kambani yeinishuwarenzi yako uye vaudze zvese.
Tsvaga mumiririri wezvemitemo nekufonera gweta rekukuvara kana gweta.
Mhando Dzengozi Dzakakuvadzwa
Njodzi diki dzinogona kukonzera kukuvara kudiki senge mabundu kana kushungurudzika kwemhasuru. Nekudaro, tsaona huru dzinogona kukonzera kukuvara kwakanyanya uye kunyange kufa. Mhando dzakajairika dzekukuvara tsaona dzinogona kukonzerwa nekuda kwetsaona dzemabhasiketi kana mudhudhudhu dzakanyorwa pazasi:
Mapfupa akaputsika uye dislocation
Musoro uye mutsipa kurwadziwa
Kukosora uye kukuvara
Kuremara kusingaperi kana kuoma mutezo
Spinal tambo uye kushungurudzika kumashure
Kukuvara kwakanyanya mudumbu kana mudumbu
Dhadharo & Mhedzisiro
Kuenzaniswa nengozi dzemotokari, mudhudhudhudhudhu kana tsaona yemabhasikoro inogona kukubhadharisa kanosvika gumi nemaviri. Semunhu akabatwa mutsaona, iwe unogona kutsvaga mari yekubhadhara mari yazvino uye yemangwana yezvokurapa, kushungurudzika mupfungwa nekuda kwemarwadzo nekutambura, kurasikirwa kwemubairo kana mari, uye kukuvara kwakashata kana kurasikirwa kwezvinhu.
Nekudaro, kuti uwane muripo wakabudirira, unofanirwa kuratidza vatongi kuti hausiwe wakakanganisa uye wakatevera mitemo yese yakakosha. Zvikasadaro, unogona kuve nemhosva. Semuenzaniso., Kana iwe wanga usina kupfeka ngowani paunenge uchityaira, unokwanisa zvakare kuve nemhosva.
Gweta Rinogona Sei Kubatsira?
Gweta rakanaka rekukuvara kwega kana gweta rinoshanda netsaona dzemabhasiketi kana mudhudhudhu muDubai rinogona kukubatsira iwe nekwavo kana bhasikoro tsaona yemotokari mutsaona nekuti ivo vanoziva mutemo uye vanobata zvisingaverengeki zviitiko zvakadaro. Pasina magweta akanaka anoshanda nengozi dzemabhasiketi kana mudhudhudhu parutivi rwako, zvinova zvakaoma kuti utore muripo sezvo usingazive kuti uchafamba sei nenyaya yacho.
Ivo havagone chete kukutungamira neakaomarara maitiro asi zvakare vanove nechokwadi chekuti iwe hauna kubatwa nemhosva yengozi kana kuti zvishoma, kudzikisira mikana. Pamusoro pezvo, nekukumiririra mudare redzimhosva, magweta ane hunyanzvi anogona kutaurirana iwe panguva yekumhan'ara kana kuwana muripo wakakodzera.
Gweta rekukuvara kwega kana gweta
Gweta rezvekukuvadzwa kwega kana gweta rinoshanda netsaona dzemabhasiketi kana mudhudhudhu kuDubai